Jiolahy raindahiny :: Notsatohany lefona ny vadiny bevohoka • AoRaha
Olona maro no fantatra fa efa maty novonoin’ity lehilahy iray malaza ratsy amin’ny fanakanan-dalana any amin’iny lalam-pirenena faha-13 iny. Tsy mifidy lasibatra izy satria vao haingana no nanaperany ny ain’ny vadiny, izay bevohoka, tamin’ny alalan’ny lefona. Saika mbola hamono ny rainy (lehilahy manome lamosina amin’ny sary eo amin’ny pejy voalohany) izy no lavon’ny zandarimaria tany Bekily, afak’omaly hariva.
Nikoizana ny asan-jiolahy notarihin’io lehilahy tamin’ny lalam-pirenena faha-13 mampitohy an’ Isoanala sy Beraketa, tahaka ny fampihorohoroany ny distrikan’i Bekily. Vao andro vitsy izay no namoizan’ny vadiny ny ainy. Mbola teo am-pitondrana vohoka ilay vehivavy no maty tsy tra-drano vokatry ny tsatoka lefona nahazo azy.
Nahazo fampandrenesana momba ny fivezivezen’ ity lehilahy tany Manakoliva-Bekily ny mpitandro filaminana, tamin’ity herinandro ity.
Hitan’ireo zandary nalefa namita iraka hisambotra azy tokoa izy. « Sady nitoraka lefona ilay lehilahy rehefa nahatazana an’ireo zandary hisambotra azy no nirifatra nitsoaka, tamin’ny alarobia hariva tokony tamin’ny 5 ora. Voatifitra teo amin’ny lamosiny izy ary nitarika tamin’ny fahafatesany », hoy ireo zandary any Bekily.
Nampitain’ny loharanom-baovao avy any an-toerana ihany koa fa teo am-pikasana hamono ny rainy io jiolahy io no izao tra-tehaka sy lavon’ny bala izao. Isan’ireo nanampy ny mpitandro filaminana tamin’ny fanenjehana azy ny fianakaviany notarihin’ny rainy, talohan’ny fahafatesany.
Nambaran’ny mponina any Manakoliva-Bekily fa efa nigadra tao amin’ny fonjan’i Betroka noho ny raharaha vono olona itsy lehilahy itsy saingy tafavoaka ny fonja hatrany.
Vono olona Ben’ny tanàna vehivavy maty voatifitra
Lozam-pifamoivoizana Mpitaingina môtô roa lahy maty voadonan’ny taksibe
Raharaha Ambositra Mbola tazonin’ny zandary ny lehiben’ny fonja teo aloha
Fahamaizana tany Toliara :: Afon-dakozia nandrava trano efapolo mahery
Fifampitifirana mahery vaika :: Miaramila sy zandary voatafika teo am-pisakafoanana